Ọdụ ụgbọ elu Istanbul gara n'ihu na-eto | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulỌdụ Istanbulgbọelu Istanbul nọgidere na-eto
Mehmet Cahit Turhan, Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa, bipụtara otu isiokwu akpọrọ “Ọdụ ụgbọ elu Istanbul na-aga n'ihu na-eto ısında na mbipụta November nke akwụkwọ akụkọ Raillife.
Turkey ụgbọelu elu ugwu na Istanbul na ọdụ ebu 3. ọrụ ndị na-agba n'okporo ụzọ na-aga n'ihu ngwa ngwa. 3, nke akwadoro inye ya n’oge na-adịbeghị anya. Istanbul Airport runway onwe ha, ike nke onwe ha yiri ọrụ na a ọnụ ọgụgụ nke mbụ track na Turkey, mgbe ke Europe ga-abụ nke abụọ mgbe Amsterdam ọdụ.
Agbanyeghị, anyị bidoro mbọ anyị ka anyị mejuputa 'ịgbada n'otu ụzọ n'okporo ụzọ atọ', nke a na-anaghị etinyere na mba ọ bụla na-abụghị US, na ọdụ ụgbọ elu Istanbul. N'ụzọ dị otú a, Turkey na-meghere ọhụrụ ụzọ ụwa na nkọwa na okwu nke ụwa ọtụtụ decomposition si n'ọdụ ụgbọ Istanbul Airport, ọ ga-enye ịrịba enyemaka si na nrughari ahụmahụ na onwe ha 3 track.
Ozugbo usoro ọsọ na-arụ ọrụ, Airportgbọelu Istanbul ga-enwe ndị ọrụ 3 runway nwere arụmọrụ nnwere onwe na 5. Ekele maka ụzọ ụgbọ elu ọhụrụ, ikike ụgbọ elu ga-abawanye site na nara ụgbọ elu 80 gaa 120 kwa elekere, ebe mgbanwe nke ụgbọ elu ga-abawanye. Na mgbakwunye, 3 dị nso na ọdụ ụgbọ elu ebe a na-eduzi ụgbọ elu ụlọ. Site na mmecha nke uzo ugbochi oge taxi nke ugbua ga agbada site na 50. Na mbu anyị na-eme atụmatụ iji usoro 3 na nchịkọta dị iche iche. Mgbe ahụ, dabere na ịdị mkpa nke okporo ụzọ, a ga-eji ụfọdụ okporo ụzọ gbapụ, ụfọdụ okporo ụzọ maka ịrị ala ma ọ bụ pụọ. Usoro a ga - eweta mmụba dị ukwuu na ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu ndị nwere ike ịgbada ma weghara.
Airportgbọ elu Istanbul, nke na-aga n'ihu na ụbọchị ọ bụla na-agafe, ga-abụ otu n'ime ndị ọkwọ ụgbọ ala kachasị mkpa nke akụkọ uto uto 20, dịka anyị kwurula, mgbe ọ na-eru n'ike ya. Ọ ga-egbo mkpa Eshia na Afrịka yana Istanbul ma weta Istanbul n'ọnọdụ kwesịrị ya n'ahịa ụgbọ elu mba ụwa. Ọ ga-abụ otu n'ime ebe akụrụngwa nkesa kacha mkpa n'ụwa, ọkachasị na Europe na mpaghara Asia-Pacific. Istanbul ga-abụ obodo nke aş gafere oge yanı dịka oge Fatih Sultan Mehmet.
ARUS na-aga n'ihu na-eto eto ma na-eme ka ndị ọhụrụ na-arụ ọrụ
Newgbọ elu ụgbọ elu Istanbul New Tüm
Gburugburu ciallọ Ahịa Newgbọelu Ọhụrụ Istanbul Yoğun
Njikwa ego na-aga n'ihu na Istanbul New Airport
Mgbasa Ọhụrụ Nchebe na Istanbul New Airport na-aga n'ihu
Nnukwu njem na-aga n'ọdụ ụgbọ mmiri Istanbul
3. Ngwa ịbanye n'ọdụ ụgbọ elu Nchekwa Ndị Ọrụ…
Yozgat's Yggt na ọdụ ụgbọelu Proj
Ọrụ na-aga n'ihu na ụzọ 5 maka Kanal Istanbul
Ọrụ ndị dị n'ụlọ elu Greater Istanbul Tuneli bụ ngwa ngwa…
Interestbawanye Mmasị Ofesi na Channel Istanbul Project aya
Airportgbọ elu ụgbọ elu Istanbul 3. runway
Magazin nke Railitife nke November
Ndewo na Iron Silk Road